भद्रगोलबारे पाण्डे समाजको आयो फेरी यस्तो अचम्मको गुनासो, अब के होला ? – जलजला अनलाइन
Posted on March 15, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on भद्रगोलबारे पाण्डे समाजको आयो फेरी यस्तो अचम्मको गुनासो, अब के होला ?
फागुन ३०, काठमाडौं । हास्य टेलीश्रृंखला भद्रगोलका प्रमुख पात्र ‘पाँडे’ मा आपत्ति जनाउँदै पाण्डे समाजले पठाएको पत्रमा मिडिया हबले जवाफ दिएको छ । तर, सो जवाफमा पाण्डे समाजले चित्त बुझाएको छैन ।
‘पत्रको व्यहोराबाट हाम्रा बन्धुहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्न, अब वैठक बसेर साझा धारणा बनाउँछौं र थप कदम चाल्छौं,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
‘आजकाल त हाम्रा बच्चाहरुले पनि सोध्न थालेका छन् के पाँडेहरु यस्तै हुन्छन् त भनेर । उच्च तहका सरकारी कर्मचारीले पनि यो कुरा उठाउनुपर्‍यो भन्नुभयो । त्यसैले एक्सन लिएका हौं । हँसाउने भनेर जे पनि देखाउनु त भएन नि ।’
आजको भद्रगोल यस्तो छ भिडियोमा हेर्नुस
पाँच वर्षसम्म चाहिँ किन चुप बस्नुभयो त भन्ने प्रश्नमा महासचिव पाण्डेले भने, ‘खासमा पहिलेदेखि नै गुनासो आइरहेको थियो । मैले चाहिँ त्यति धेरै हेरेको थिइनँ ।
पाँडेले कहिले काट्टो खाएको, कहिले पैसाका लागि जिउँदै पुरिएको देखाइँदो रहेछ । पाण्डेहरुको यस्तो चरित्र नै होइन । हाम्रो त वीरताको इतिहास छ । नेपालको एकीकरणमा पाण्डेहरुको भूमिका तपाईंहरुलाई थाहा नै होला । ’
उनले आफूहरुले पत्र पठाएको समाचार आएपछि धेरै पाण्डे वन्धुहरुले धन्यवाद दिइरहेको समेत उल्लेख गरे । ‘सबैले हाम्रो मनमा पनि यो कुरा खट्किरहेको थियो भनेर एक्सन लिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।
उनले नेपाल टेलिभिजनल पनि यो विषयलाई गम्भिररुपमा लिनुपर्ने माग गरेका छन् । आफूले टेलिभिजनका गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई फोन गरेर पनि गुनासो गरेको पाण्डेले बताए ।
‘उहाँले म माथि कुरा राख्छु भन्नुभएको छ, हेरौं के गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । यदि पाण्डेको चरित्र पुरानै ढर्रामा आइरहेको खण्डमा थप कदम चाल्न बाध्य हुने उनी बताउँछन् ।
मङ्सिर २३, काठमाडौँ । २ बर्ष अगाडि नायिका रीमा विश्वकर्माले बेलायतमा बस्दै आएका रोबर्ट बीकसँग बिहे गरेकी थिइन् । यी दुइको बिबाह काठमाण्डौको हायात होटलमा भएको थियो । हायात होटलमै आफन्त, चलचित्रकर्मी र केही पत्रकारलाई बोलाएर यी दुइले भव्य भोज समेत दिएका थिए । बिहेपछि रीमा कहिलेकाही बेलायत पनि पुग्थिन् । रीमा चलचित्र क्षेत्रमा नै […]
रित्तो गाग्री ठटाउँदै प्यूठानीले खेले यस्तो देउसी
Posted on November 11, 2018 Author Jaljala Online
कात्तिक २५, प्यूठान । तिहारको बेला देउसी भैलो खेल्न मादल, खैंजडी, मुरली बोकेर गाउँघरमा डुलेको दृष्य त तपाईंले देख्नु भएकै होला तर, रित्तो गाग्री बोकेर देउसी भैलो खेलेको भने सायद देख्नु भएको छैन होला । प्युठानमा एउटा देउसी भैलो टोलीमा यस्तै नौलो दृश्य देखियो । प्यूठान रस्पुरकोटका युवा, युवतीहरु रित्तो गाग्री बोकेर देउसी भैलो खेले […]
अनौठो संसार अन्तराष्ट्रिय अर्थ/विकास खेलकुद पत्रपत्रिकाबाट बैदेशिक रोजगारी मनोरञ्जन मुख्य समाचार राजनीति लेख/विचार शिक्षा सूचना/प्रबिधि स्वास्थ्य/जीवन शैली
भारतीय तटबन्धको पुर्नसंरचनाबारे छलफल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सुझाव
Posted on August 19, 2017 Author जलजला अनलाइन
भदौ ३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणबारे पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग परामर्श लिएका छन् । चार दिनपछि भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने विषयबारे छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भदौ ७ गते बाट गर्ने भनिएको भारत भ्रमणको सन्र्दभमा दुई पक्षीय वार्ता तथा भेटघाटमा उठाउनुपर्ने विषयका बारेमा पूर्व […]